Xadhiga bood, Kalooriyooyinka Miisaanka Dijitaalka ah Waqtiga Dejinta Xadhig ka Bood oo leh Tiitarka Jimicsiga Gudaha iyo Dibadda
Miisaanka xakamaynta magnetic-ka ee saxnaanta sare ku dhex dhisan kaas oo kuu ogolaanaya inaad la socoto wakhtiga iyo wareegyada iyo inta kaloori ee aad gubtay.Shaashadda yar ee ka muuqata xadhigan boodboodka isdhaafka ah waxay tusinaysaa Miisaanka, Kaloriinta iyo wareegyada ayaa faa'iido leh si loola socdo horumarkaaga jimicsi
Xadhiga bood, Kalooriyooyinka Dijitaalka ah ee Culayska Wakhtiga Dejinta Xadhigga Ka-boodista Xisaabta ee Jimicsiga Gudaha iyo Dibadda
【KU bood xadhkaha koontada】:
Miisaanka xakamaynta magnetic-ka ee saxnaanta sare ku dhex dhisan kaas oo kuu ogolaanaya inaad la socoto wakhtiga iyo wareegyada iyo inta kaloori ee aad gubtay.Shaashadda yar ee ka muuqata xadhigan boodboodka ah ee iskutallaabta ah waxay tusinaysaa Miisaanka, Kaloriinta iyo Goobabada ayaa faa'iido leh si loola socdo horumarkaaga jimicsi.
【XIDIGA boodboodka ee la hagaajin karo】:
xadhigga boodboodka ee naqshadaynta jimicsiga oo leh dhererka 280cm ee xadhigga, la qabso dhererka weyn iyada oo aan qalab loogu talagalay qof dheer.Ma aha oo kaliya dadka waaweyn, laakiin sidoo kale ilmaha ayaa ku ciyaari kara, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sidii ciyaar qurux badan.
【QAABKA XIGASHADA OO FURSAD LEH】:
Gacan keliya ayaa miisaankeedu yahay 130 garaam oo keliya si ay u fududaato oo ay ugu raaxaysato qabashada.Gacan-qabsiyo ergonomi ah oo gaar ah iyo ka-hortagga simbiriirixidda nashqadaynta waxay bixiyaan dareen gacan-qabasho oo qumman.Qalabka jimicsiga saxda ah ee haweenka iyo ragga.
【XIDIGA SHAQADA OO DHAMAAN AH】:
Waa ciyaar fudud oo gudaha ah iyo qalab jimicsi oo u fiican qof kasta, ku ilaalinaya caafimaadka oo ku raaxayso safarkaaga jirdhiska shakhsi ahaaneed ee xawaarahaaga adiga oo ku raaxaysanaya gurigaaga.
【TAYO RAACSAN OO DAMMAANAD LEH】:
Xadhkaha birta ah waxaa lagu dahaadhay PVC, kaas oo ka muuqda adkeysi, adkeysi iyo faseexnimo, waxay meesha ka saaraysaa isku-duubnida iyo isku-xidhka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku booddo dusha kasta.DAMMAANKA NOLOSHA, haddii aad waligaa wax dhibaato ah kala kulanto xadhigga jimicsiga sabab kasta, la xidhiidh kooxdayada taageerada.
Hore: Xadhig Bood oo Caadi ah Silig Bir ah oo leh Gacan-Dheer oo loogu talagalay Carruurtu Layliga Xawaaraha Ka Booda
Xiga: Xadhiga boodboodka xawliga xirfada leh , Xadhkaha boodboodka dabacsan ee jimicsiga dumarka, Corssfit xadhiga boodboodka
xadhig la'aan xad-dhaaf ah, xadhig boodboodka, xadhig xirfad leh, xadhig booda caqli, xadhig ka booda iibso, xakamee xadhig boodi,